तीनसय रुपियाँको मेशिन किनेर सुरु भएको व्यवसायिक यात्रा तीन हजारलाई रोजगारी दिदै…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर ९, २०७७ मंगलबार 2
काठमाडौं : ‘सबैले सपना देख्नुस् र सपना मुताविक मेहनत गर्नुस्, सफलता आफैं पछ्याउँदै आउँछ । आफ्ना सपना (योजना)हरुबारे ज्ञान हासिल गर्नुस् । सपनामा यसरी डु’ब्नुस् की सुत्दा, उठ्दा, हिड्दा, खाँदा, बस्दा, बोल्दा पनि सपनाकै कुरा गर्नुस् । त्यसपछि सफलता पक्का छ ।’
यो भनाई हो उद्यमी व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठको । उनी यतिबेला निजी क्षेत्रको छाता सं’गठन नेपाल उद्योग बा’णिज्य महासंघको वस्तु’गत समू’हतर्फ उपाध्यक्षको उम्मे’दवार छन् । फगत सपना देख्ने मात्रै होइन, त्यसमा डु’ब्नेले मात्रै सफलता पाउँछ भन्ने अञ्जन श्रेष्ठको लक्ष्मी ग्रु’पले पनि त्यसरीले नै सफलता प्राप्त गरेको अन्जनको अनुभव छ । उनी तीन वर्षको हुँदा २०३० साल पुस ५ गते तीन ३ सय रुपियाँको मे’सिन किनेर लक्ष्मी ग्रुप’को स्थापना भएको थियो । अहिले त्यही ३ सयको ल’गानीबाट वि|स्तार लक्ष्मी ग्रुपमा ३ हजार जनाले त प्रत्यक्ष रोजगारी नै पाईरहेका छन् ।
यतिबेला नेपालको औ’द्योगिक वि’कासमा लक्ष्मी ग्रु’पको छुट्टै पहिचान स्थापित छ । त्यो पहिचानको एक हिस्सेदार हुन अन्जन श्रेष्ठ । कन्फे’क्सनरीबाट सुरु भएको लक्ष्मी ग्रु’पको व्यवसायिक यात्रामा यतिबेला समृ’द्धि स्टिल, डेरी उद्यो’ग, प्या’केजिङ उद्योग जोडिईसकेको छ । र निक’ट भविष्यमै पर्यटन र खाद्यान्नको व्यवसाय पनि थपिँदैछ । आफ्नो व्यवसायीक यात्रालाई अन्जन ‘नेपालको सामाजिक तथा आ’र्थिक रुपान्त’रणको अ’भियान’ मान्छन् । चार दाजुभाईमध्ये माइलो सन्तानका रुपमा ज’न्मिएका उनीले यतिबेला लक्ष्मी ग्रुपमा विशेषगरी पू’र्वाधार क्षे’त्रको व्यवसाय हेर्छन् । ‘स’मृद्धि स्टि’ल मेरो नेतृ’त्वमा छ । एक वर्षदेखि उत्पादन बजारमा आईसकेको छ । उर्जाका दुई परियोजना सोलुखुम्बु र गोरखामा छ’नौट भएका छन् । सिमेन्ट उद्यो’गका लागि खानी लिईसकेका छौं, उद्योग द’र्ता गरिरहेका छौं’, अन्जनले भने ।
शंकरदेव क्या’म्पसबाट बीक’मसम्मको अध्ययन गरेका उनीका २२ र २५ वर्षका दुई छोरा छन् । दुवै अध्ययन सकेर व्यवसायीक वि’रासत सम्हाल्न तयार छन् । ‘हामी सबै दाजुभाई संगोलमै छौं, मेरा दुई छोरामध्ये एउटाले व्यवसायीक यात्रा नै आरम्भ गरिसकेको छ’, अन्जनले सुनाए । उनले क्या’म्पस अध्ययन गर्दा काठमाडौंमा पोखराको उद्यो’गको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर व्यवसायीक यात्रा थालेका थिए । त्यसको दुई तीन वर्षमै आफ्नै अ’गुवाईमा जया पोलि’थिन नामको प्लास्टि’कको प्याके’जिङ उद्योग स्थापना गर्न सफल भए । लक्ष्मी ग्रु’पको पोखरा, नवलपरासी र काठमाडौंमा व्यवसायीक सञ्जाल विस्ता’रित छ ।
अन्जन महासंघमा लागेको १६ वर्ष भयो । पछिल्लो १२ वर्षदेखि महासंघको कार्यसमितिमै बसेर व्यवसायीका हक अधिकार र लगानीको वातावरण बनाउन तल्लिन छन् ।
उनी भन्छन्, ‘म वस्तुगत स’मूहतर्फबाट उपाध्यक्षको उम्मे’दवार बनेको छु । १६ वर्षदेखिको मेरो स’क्रियता र १२ वर्षदेखि महासंघमा गरेको योगदान प्रष्ट छ । हामी सामु’हिकतामा विश्वास गर्छौ । व्यक्ति’वादी चरित्रको वि’पक्षमा थियौं र छौं ।’ महा’संघलाई सं’स्थागत रुपमा चलाउनुपर्छ भन्नेहरु यसपाली एक ठाउँमा उभिएको अन्जनको भनाई छ ।
महासंघको बार्गे’निङ पावर
राजनीतिक परि’वर्तनहरुसँगै समाज र सरकारले उ’द्यमी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टि’कोणमा केही परिवर्तन आएको अन्जनको अनुभव छ । अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी यो’गदान निजी क्षेत्रको छ । नयाँ संविधानले नै पनि सरकारलाई अभिभा’वकका रुपमा अघि सारेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको छ । त्यसकारण पनि अब निजी क्षेत्रलाई नजर अन्दाज गर्नै नसक्ने परि’स्थिति बनिसकेको उनको वि’श्लेषण छ । ‘अब महासंघलाई साथै लिएर, विश्वास जि’तेर नै सरकारहरु अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा आईसकेका छन्’, उनी भन्छन् ।
आव’द्धता र सञ्जालका हिसाबले महासंघ नै सरकार पछिको सशक्त सं’गठन हो । क्रिय’शिल अन्य चे’म्बर अर्गना’इजेशनहरु सँग कार्यगत एकता गरेरै अघि बढ्ने सोच अन्जनको छ । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीक वातावरण र लगानी सुरक्षाका लागि सबै सं’स्थाहरुसँग सहकार्य अघि बढाइनेछ ।’
महासंघ भित्र व’स्तुगत समूहले अविभावकत्व नपाएको गु’नासो यथा’कदा सुनिने गरेको । तर अब नेतृत्वमा आउँने परि’स्थिति बन्दै गएको अन्जन बताउँछन् । ‘हामी सहभा’गीतामूलक स’क्रिय महासंघको पक्षमा छौं । सबै उ’द्यमी व्यवसायीहरुले महासंघमा अपन’त्व मह’शुस गर्नेछन्’, उनले सुनाए ।
नयाँ संविधान र स्थिर सरकारपछि
नयाँ संविधान र स्थिर सरकारपछि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अ’पेक्षा थियो । तर, त्यस्तो सुधारको महशुस अझै गर्न नसकिएको अन्जन श्रेष्ठले दुखे’सो पोखे ।
तीस वर्षको अनुभवले यसो भन्छ
अन्जन भन्छन्, ‘मैले २०४६ सालपछिका हरेक परिव’र्तन हेरेको छु । सबैमा म आफैं सहभागी पनि भएको छु । २०४६ सालमा सड’कमा आ’न्दोलन गर्न मै पनि पुगेको थिएँ । त्यसपछि द्ध’न्द्ध भयो, आ’न्दोलन भयो, गण’तन्त्र आयो, र अन्तिममा नयाँ संविधान जारी’पछिको निर्वा’चनले तीन तहको सरकार दियो । नेपालमा चार वटा राजनीतिक परिवर्तनमध्ये तीनवटाको मै साक्षी छु ।’ तर पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि’कोणमा भने खासै ठूलो परि’वर्तन नआएको उनी बताउँछन् ।
कर’दातालाई सम्मान खोई ?
कर’दातालाई सम्मान गर्ने दिन कहिले आउँछ ? भनेर उद्यमी व्यवसायी समुदाय व्याग्र प्रतिक्षामा रहेको छ । ‘विदेशमा कर’दातालाई सम्मान गरिन्छ, नेपालमा पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी अभिया’न चलाईरहेका छौं’, उनी भन्छन् । दुई अंकको आ’र्थिक वृद्धि|दर गत वर्ष अर्थतन्त्र २ प्रतिशत खु’म्चियो । यसपटक ऋ’णात्मक हुने हो की ? भन्ने त्रा’स छ । को’रोनाकालपछि अर्थत’न्त्रलाई दुई अं’कको वृद्धि’दरमा पुर्याउने योजना अहिले अन्जन श्रेष्ठको समूहले बनाईरहेको छ । ‘त्यसको नेतृ’त्व गर्ने निजी क्षेत्र’ले नै हो, महासंघले नै हो’, उनी थप्छन् ।
नेपालको चे’म्बर आन्दो’लनमा आफ्नो पनि केही योगदान रहेको अन्जनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘अब पनि मेरो मुल ध्येय भनेको लगानीको वातावरण नि’र्माणमा नेतृ’त्वदायी भू’मिका खेल्नु नै हुनेछ । हामीले चेम्बर एक्ट (चेम्ब’र कानुन)को मागलाई घ’नीभू’त ढंगले अघि सार्छौ । चे’म्बर एक्टको माध्यमबाट व्यवसायिक वातावरण बनाउन मेरो भू’मिका रहन्छ ।’
तीन तहका सरकारबारे
आम व्यवसायीहरुले व्यवसायिक लागत नबढ्ने बाताबरण खोजिरहेका छन् । त्यो कुराको सुनि’श्चितता संबिधान आउँदा नै आफूहरुले खोजेको अन्जनले सुनाए । ‘तीन तहको सरकार आएपछि सुरु सुरुमा व्यवसायीक लागत बढेको थियो । तर अहिले भने केही सहज भएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि कुरा बुझ्न थालेका छन् । अप्रत्य’क्ष कर लगाउने कुरा अझै पनि केही देखिएका छन् । अब त्यसको पनि अ’न्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने ।
नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । दुई देशबीच हुनुका चुनौती र अवसर दुवै छन् । अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सरकारले आर्थिक कुट’नीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्ने अन्जनको वि’श्लेषण छ । अन्त|रदेशीय व्यापारमा सरकारकै भू’मिका निर्णायक हुने भएकाले यसमा सरकारले भू’मिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ । भारतले अघि सारेका दुई वटा आर्थिक कुट’नीतिका उदाहरण पनि अन्जनले दिए । उनका अनुसार हार्ली डेभिड’सनले भारतमा प्ला’न्ट लगाउन खोजेको थियो । भारतले आफ्नो आँप अमेरिका नि’र्यात गर्न पाउनुपर्ने सर्त राख्यो ।
अमेरिकाले त्यो सर्त स्वी’कार गर्यो । र भारतमा हा’र्ली डेभि’डसनको प्लान्ट पनि लाग्यो र भारतको आँप अमेरिका जाने बाटो पनि खुल्यो । यसलाई म्या’ङगो ट्रि’टी भनिने गरेको छ । त्यस्तै, भारतमा युरोपि’यन मुलुकका अटोमो’बाइल कम्पनीहरुले प्ला’न्ट लगाउने इच्छा देखाएका थिए । भारतले आफ्ना मस’लाहरु युरो’पमा निर्या’त गर्न पाउनुपर्ने सर्त राख्यो । युरो’पियन युनिय’नले त्यो सर्त स्वीका’र गर्यो । अन्ततः भारतमा युरोपका अटोमो’बाइल कम्पनीका प्ला’न्ट आए भने भारतीय मसलाले युरोपियन बजारमा सहज पहुँच पायो । यसलाई स्पा’इस ट्रि’टी भनिने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि यस्तै कुट_नीतिलाई अख्ति’यार गरेर हाम्रा उत्पादन भारत र चीनमा सहज निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने अन्जनको तर्क छ । महासंघले भने भारतको फिक्की, सिआईआई, चीनको चाइना चेम्बर अफ कम’र्शसँग सहकार्य गरेर बजार खोज्ने काम गर्ने उनले बताए ।
१६ वर्षदेखि महासंघसँगको आ’वद्धता, १२ वर्षदेखि कार्य समितिमा बसेर गरेको योगदान नै आफ्नो जीतको आधार भएको अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कुशकुमार जोशी उद्योग समिति सभापति हुँदा उहाँले ब्रा’ण्ड प्रोटे’क्सन ग्रुप बनाउनु भएको थियो, त्यसमा सह’संयोजक हुँदै संयोजक भएँ । नौ वर्षसम्म मैले रोजगा’रदाता परिषदको सदस्य भएर काम गरेँ । त्यतिबेला नेपालमा ट्रे’ड युनियनको दा’दागिरी नै थियो । यु’नियनको दा’दागि’री घटाउन मैले ठूलो भू’मिका नि’र्वाह गरेको थिएँ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा पनि मेरो योगदान छ’, उनले अनुभव सुनाए ।
त्यति मात्रै नभएर, राज’श्व समितिको सह’संयोजक, उद्योग समितिको सभापति भएर औद्यो’गिक व्यवसाय ऐन र औ’द्योगिक नीतिमा पनि भू’मिका खेलेको पनि उनले सम्झिए । नेपालमा भित्रिने वस्तुहरुमा नेपाल गुण’स्तर बराबरको गुणस्त’र हुनैपर्छ भनेर आफूले लबिङ गरेको पनि अन्जनले बताए ।
‘लगानी सुरक्षा गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने नै मेरो मुल एजेण्डा हो । भावी पुस्ताका लागि पनि नेपाल लगानीको उ’र्वर भूमिका रुपमा स्थापित गर्न हामी लागिपरेका छौं’, उनले भने । अन्जन आफ्नो जीत’प्रति निश्चिन्त देखिन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सम्भावित परि’णामलाई लिएर उत्सा’हित छु । वस्तु’गत समूहका अध्यक्षज्यूहरुले तपाई आउनुपर्छ भन्नु भएको छ । एक वर्षदेखि चु’नावी अभियानमा छौं । हाम्रो टिम नै अनुभवी र युवाहरुको समि’श्रणबाट बनेको छ ।’ उनले थपे, ‘सबल, सु’दृढ र सफल निजी क्षेत्र बनाउने हाम्रो अभियान हो । अहिलेसम्म गरेका काम र भोलीका दिनमा गर्न सक्ने कामका लागि थप विश्वस गरिदिनुस् ।’-कर्पोरेट नेपाल
Prevजिरे खुर्सानीको ‘जिरे’ यति ठुलो भए, काम नपाउँदा रोए ! सानै भएको भए फिल्म सिरियल खेलाउथे होला भन्दै पोखे दुखेसो…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
Nextबधाई ! वीर गोर्खाली चेलीले बेलायती सेनामा तहल्का मच्चाइन, पहिलो पल्ट रचिन यस्तो किर्तिमान…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
राहुल र स्मिताको पुनर्मिलन भएपछि एक युवा आ’क्रोशित ! (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
संयुक्त आन्दोलन गरे ओली सरकार एक हप्तामा ढल्छ : बाबुराम भट्टराई
मनोज गजुरेल आईसीयूमा हुँदा पूर्वपत्नी मीना ढकालको मनछुने पत्र…उनि भन्छी अहिले पनि उत्तीकै माया गर्छु !